Iifom Zokwakha ngeFomSpring | Martech Zone
Iifom Zokwakha ngeFomSpring
NgoLwesine, Agasti 2, 2007 NgoLwesine, Septemba 19, 2013
Iposi yanamhlanje ivela kumhlobo kunye neBlogger yeNdwendwe, UAde Olonoh:
Ukuba wenza nawuphi na umsebenzi kwi-intanethi, mhlawumbi ujonge isixhobo sokukunceda wakhe iifom ze-Intanethi. Ukuba uyibhlog, mhlawumbi kungenxa yokuba ukhangela into ethe kratya ngakumbi kunokuba ungayifumana kwifom yempendulo eqhelekileyo.
Ukuba ungumthengisi, mhlawumbi ufumene ukuba yingxaki ukuseta ifom yokuqokelela amangenelo okhuphiswano, okanye uzabalazile ukuzama ukufumana uhlobo oluthile lwexabiso kumakhulu okanye kumawaka e-imeyile kwibhokisi yakho engenayo njengesiphumo somkhankaso ophumeleleyo kwi-Intanethi. Yivume: Nokuba uyingcali ye-HTML, uwuthiyile umsebenzi odinisayo wokwenza iifom.
Ndifuna ukukwazisa IFomSpring, Isixhobo esikhulu esivumela abasebenzisi balo naliphi na inqanaba lesakhono ukuba bakhe iifom ze-Intanethi ngokulula, kwaye ikuncede ngcono ekulawuleni ukungeniswa okuthathe kubathengi Yayisungulwe ekuqaleni kuka-2006, kodwa yakhutshwa ingu-2.0 kule veki ibandakanya iqela lezinto ezipholileyo ezenza ukuba kulungele ukujongwa.
Ubuhle beFomSpring kukuba unokuseta ifom yoqhakamshelwano kwi-Intanethi, uphando, okanye ifom yobhaliso kwimizuzu nje ngaphandle kokusebenzisa ikhowudi ye-HTML okanye yokubhala. Unokukhululeka kukwazi ukuba ungayenza yonke ngokwakho ngaphandle kokuba ubize umntu kwi-IT.
Nantsi umfanekiso wescreen somakhi wefom-uyayakha ifom yakho ngokurhuqa kwaye ulahle amasimi, kwaye unokujonga ukuba ifom yakho izakubonakala njani ngexesha lokwenyani:
Xa ulungele ukusebenzisa ifom yakho, unokukopa kwaye uncamathisele ikhonkco oza kulithumela kubasebenzisi bakho, okanye ubambe umgca omnye wekhowudi ye-HTML onokuyifaka kwibhlog yakho okanye kwiwebhusayithi. Elona candelo lilungileyo malunga noku kukuba ungadibanisa ngokupheleleyo ifom yakho kuyilo olukhoyo, ugcine uphawu lwakho.
Ungabukela uluhlu lokungeniswa olungena ngezaziso ze-imeyile okanye nge-RSS feed. Kwaye xa sele ukulungele ukuqhubekeka neziphumo unokukhuphela ispredishithi se-Excel esinezinto ezingenisiweyo, okanye ungenise loo datha kwindawo yogcino lwedatha okanye kwinkqubo yeCRM.
Eyona nto intle kukuba unokwenza iakhawunti yasimahla ebonelela ngokusebenza. Ukuba ujonga ukusetyenziswa okunzima, izicwangciso ezihlawulelweyo ziqala kwi- $ 5 / ngenyanga ngaphandle kwezivumelwano okanye iifizi zokusetha.
Zama i Idemo epheleleyo, funda ngakumbi ngayo yonke Iimbonakalo, okanye bhalisela iakhawunti yasimahla.
Ukubulala mna (Blog) Ngokuthambileyo
Todd Harrison - LA Intloko yokuFota
Agasti 2, 2007 ngo-9: 52 PM
Ndineengxaki ezithile kwixa elidlulileyo ngeefom kunye nokufumana lonke ulwazi kumakhulu nakumakhulu ee-imeyile. oku kuvakala njengesixhobo esikhulu kwishishini lam. Iidola ezi-5 ngenyanga akukho nto!
Agasti 3, 2007 ngo-5: 47 PM
Xa ndifunda isihloko, bendicinga ukuba yinto yokuba indawo inokunceda umntu ukuba enze ifomu aza kuyisebenzisa kwindawo yabo. Oko kwandivuyisa, kuba babebaninzi abantu endandiza kuthumela kubo ikhonkco, ukuze bazisebenzise.
Kwisicelo seshishini, ukuba bendizakusebenzisa inkonzo ukwenza ifom, bendiya kufuna ukuba yenze ifom, ukufaka iikhowudi, kwaye undinike imiyalelo yokwenza ukuba isebenze kwindawo yam, ndisebenzisa iserver yam.
Kwishishini, nje ukuba nayiphi na ingcaciso ihleli kwiiseva ezingezizo ezakho, ngakumbi iifom- kunye neefom zonxibelelwano?!?! ewe! - ayilothuba lokuba ndiyivumele ihlale kwiseva yenye inkampani. Ukuba le nkampani iyahamba ngesisu ubusuku bonke (cinga ngenkampani yeVoIP yamva nje evala inkonzo kubo bonke abathengi ngaphandle kwesilumkiso), ulahlekelwa yiyo yonke into.
Hayi enkosi. Iimali ezintlanu ngenyanga azininzi, kodwa ndineepakeji ezininzi zokubamba kwaye iindleko eziphakathi zezo phakheji yi- $ 19 ngenyanga. Okwe- $ 19, ndifumana amagama wesizinda amathandathu simahla, ngaphezulu kwama-300gig esithuba, iifom, nazo zonke iintlobo zezinye izixhobo (uninzi andizichukumisi), kunye neendawo ze-imeyile ezingenamkhawulo kunye needilesi ze-imeyile ezingama-2,000. Yongeza enye i-1,000 ngaphandle kwento.
Ukwenza iikhowudi kwifom akukho nzima. Amashishini, ngakumbi, kufuneka abenomdla ngokuvumela nabani na ngaphandle kwabantu babo ukuba balawule ulwazi lwabo. Ukuba iseva yeFomSpring iye yagqogqwa, loo nkampani iphulukene nobuso bayo. Ukugqithisa impunzi kwaye uthi, "Umboneleli wethu wale fomu yokunxibelelana uyenzile ..." sisizathu esibi.
Enkosi, kodwa ndiza kukhowudi kwiifom zam kwaye ndizenze ziphume kwiserver yam.